Copac Inoti Inoda Mari Inodarika $8 million Kuti Ipedze Chirongwa cheBumbiro Idzva
Komiti yeparamende iri kutungamira chirongwa chekunyorwa kuri kuitwa bumbiro idzva remitemo yenyika yeCopac, inoti iri kuda mari inodarika mamiriyoni masere emadhora ekuAmerica kuitira kuti ipedze hurongwa hwayo. Copac inoti izvi zviri kukonzerwa nenyaya yekuti chirongwa chayo chakawedzera mazuva, sezvo pachine basa rinoda kuitwa mudzimwe nzvimbo. Kunyange hazvo paine dambudziko remari, Copac inoti hurongwa hwekubvunzurudza vanhu zvavanoda kuti zvive mubumbiro iri huri kufamba zvakanaka, kunyange hazvo mari yaiinayo isiri kukwana.
Asi mumwe musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pakunyorwa kwebumbiro idzva remitemo paChedonje Primary School, muKadoma kuMashonaland West, unonzi wakanganiswa nevatsigiri veZanu PF, avo vanonzi varambidza musangano uyu kuenderera mberi vachiti havana kunge vaziviswa paine nguva.
Zvinonziwo vatsigiri veZanu PF ava, vapomerawo mhosva yekutengesa mumwe wevari kutungamira hurongwa uhu mudunhu iri, vachimirira Zanu PF, VaWalter Chidhakwa.
Zvinonzi musangano wanga uchifanirwa kuitwawo paIngezi Primary School muKadoma makare, wazomiswa mushure mekunge vapa munamato wekuvhura musangano uyu vatora mukana uyu kunyomba nekushuvira rufu vanopikisana navo.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kuZanu PF pamusoro pezvaitika izvi asi mumwe wevari kutungamira hurongwa uhu vachimirira MDC T, Amai Editor Matamisa, vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vatsigiri veZanu PF vari kukanganisa misangano iyi.
Zvichakadaro, hurongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu muguta reMasvingo, uhwo hwakambomiswa mukupera kwesvondo mushure mekunge paita mhirizhonga mune mimwe misangano, hunonzi hwaenderera mberi zvakanaka.
Zvinonzi zvikwata zviri kuita basa iri zvakasangana neChipiri kuti zvitarise zvakakonzera mhirizhonga idzi, uye zvakawirirana kuti basa riitwe pasina mhirizhonga.
Zvinonzi vari kutora pfungwa dzevanhu vakarwisana zvakare pamusangano wakaitwa kuMucheke.
Gweta, VaAndrew Makoni, vanoti zvinhu zviri kuratidza kuti hazvina kumira zvakanaka mukunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika.